🥇 ▷ Maxaa weli uga maqan Google Pixel 4 XL rafcaan qaadashada ah? Ah haa, muunadyada duubista fiidiyoowga ah ee ugu horreeya ✅
Maxaa weli uga maqan Google Pixel 4 XL rafcaan qaadashada ah? Ah haa, muunadyada duubista fiidiyoowga ah ee ugu horreeya
Laakiin markan si fiican uma soo baxdo, xitaa haddii alibis ay jiraan.
Si la mid ah kuwii ka horreeyay ee Pixel 3, xitaa mustaqbalka Pixels 4 waxay ahaayeen bartilmaameedka daadad macluumaad daadad leh, iyadoo hal bil dheeraad ah lagu sugayo munaasabada soo bandhigidda rasmiga ah, ayaa na siisay ku dhawaad ​​wax kasta oo la muujiyey iyaga oo matalaya. Faahfaahin aad u yar ayaa wali lagu keydiyaa gaariga gaariga daadinta laakiin, heerkan, xitaa nusqaamaha yar yar waxay halis ugu jiraan in la buuxiyo ka hor bilaabista. Maanta tusaale ahaan waxaan kaala hadlaynaa adiga sida Pixel 4 XL toogasho videos.
Haddii dhab ahaantii sawirradu sawirradu had iyo jeer ahaayeen mid ka mid ah kuwa gunaanadka taxanaha Pixel, isku mid lama dhihi karo fiidiyowyada, taas oo weligood si gaar ah uma iftiimayaan marka la barbar dhigo tartanka, in kasta oo heerarkiisu wanaagsan yihiin. Kuwa filayay in horumar muuqda laga sameeyo arrintan ayaa loo badinayaa inay sii jiri doonaan niyad jab mar kale sannadkan, adigoo xukumaya tusaalaha fiidiyowyo ay toogteen Pixel 4 XL, kaas oo galay galay a isbarbardhiga fiidiyowga (laga bilaabo qiyaastii 3:40 aroor hore) midka cusub ee Galaxy Note 10+.
AKHRISO: Haddana waan naqaan waxkasta oo ku saabsan Google Pixels 4
Tayada fiidiyowyada ay duubtay Pixel 4 XL gabi ahaanba qancin farqiga u dhexeeya dusha sare ee Samsung kala duwan ayaa cad. Kaliya xasillinta muuqaalka ayaa qancin leh, iyadoo wax kasta oo kale (oo ay ku jiraan maqalka) ay wali u baahan yihiin horumar si loogu tartamo kuwa kula tartamaya. Weli difaacyada Pixels cusub tusaalayaal ee qalabka iyo softiweer, dhab ahaantii Google waxay wali haysan doontaa muddo bil ka badan si ay u nadiifiso barnaamijka kamaradaha.